Curiosities, tsvakurudzo uye zvitsva
Tiri kunyatsobhabhatidzwa mumutambo we "innovative" kana wakasvika kune 3D Spatial?
"Kuburitsa bhatani kune mukana wekuvhura imwe nhanho," anonyora, pedyo nekumagumo kwechinyorwa chake, Muthukumar Kumar, achinongedzera zvakanyanya kugadzirwa kwenzvimbo dze3D, kubatsira kwayo, kukosha uye ramangwana. Ziva kuti kutaura nezveramangwana, nenzira inotitorera kure nyore charlatanism, zvinotarisirwa kuti izwi iri rive ...
Kubhadharira kunotungamirirwa kuGIS. Fiction inopesana nechokwadi
Mushure mekuverenga chinyorwa chinotanga nekushamisika kuti vashandirwi veGIS vari kutsvagei chaizvo, ndanga ndichizvibvunza kuti mhedziso idzi dzinogona kuburitswa kune nyika dzekumba kwedu dzine chokwadi chingangofanana kana chakasiyana (pamwe chakasiyana kwazvo) kubva kune chako. Iyo 'mbishi zvinhu' yakashandiswa pakudzidza zvese zvaipiwa ...
… Uye mageoblogger vakaungana pano…
Mumwe munhu aifanira kupfekedza pfungwa iyi yekugara munzvimbo imwechete, boka revanhu vakapatsanuka zvachose pahunhu, kufunga uye mutsika nemagariro, asi vakawedzera kune kusiana kwekutaura chiSpanish, vane shungu kwazvo pamusoro pezvinoitika munzvimbo yezvematongerwo enyika. Izvo ndezve "Ini National Geobloggers Musangano", yakasimudzirwa mu ...
Chii chichava manejimendi manejimendi? - chiratidzo cheCadastre 2034
Kufunga kuti marongero epasi angaratidzika sei muna 2034 zvinoita kunge isiri pfungwa iri nyore, kana tichiona kuti ingani shanduko dzakaitika mumakore makumi maviri apfuura. Zvisinei, kurovedza muviri iko kwechipiri kuyedza pane zvakaitwa makore makumi maviri pamberi paCadastre 20. Kunyatsoteerera zvirevo izvi kungave kwakakudyira ...
The National System pamusoro Property Management SINAP
Iyo National Property Administration Sisitimu (SINAP) inzvimbo yehunyanzvi inosanganisa ruzivo rwese rwune chekuita neyekugadzirisa zviwanikwa zverudzi, uko vanhu vakasiyana veruzhinji uye vakazvimirira vatambi uye vanhu vanorekodha zviitiko zvese zvine chekuita nezvinhu zvepfuma. chivakwa, chakakosha kubumbiro uye kusimbisa musika ...
Featured, Geospatial - GIS, My geofumadas, Land Management
Kana pakutevedzera kurumbidza LADM
Mune akati wandei emapurojekiti andakatora chikamu, ndakaona kuti nyonganiso inokonzerwa neLADM haina hazvo kubatana nekuinzwisisa seyakajairwa ISO, asi mukuparadzanisa huwandu hwayo hwepfungwa kubva kune yavo yekugadzira michina mamiriro. Mune mamwe mazwi, maitiro ekuishandisa. Inofanira kunge iri pachena kuti iyo LADM haina ...
Cadastre, Featured, My geofumadas, Land Management
LADM - SeMhando yakasarudzika yeiyo Land Administration Domain - Colombia
Pfupiso yehurukuro yakapihwa naGolgi Alvarez naKaspar Eggenberger kuAndean Geomatic Congress muBogotá, muna Chikumi 2016. ANT, tarisiro yeNyika munda mu ...
Blockchain uye Bitcoin rinoshandisirwa kuNyika Administration
Mune kongiresi yehunyanzvi hweruzivo ndakasvikirwa nemupepeti wemagazini, akandibvunza nezvekushandiswa kwerudzi urwu rwehunyanzvi munzvimbo yeProperty Kunyoresa, Cadastre uye Property Administration mune zvese. Iyo hurukuro yaive yakanyanya kudarika kunakidza, kunyangwe ini ndaive ndakashamisika kuti akandibvunza, ndichifunga ...
BIM - Nyika yandingadai ndakarota makore makumi maviri apfuura
Makore makumi maviri gare gare, ini ndinogona kungobatanidza BIM sekushanduka kwainomiririra panguva iyoyo, ndichisiya bhodhi rekudhirowa nekutsvaga mapepa emafaira eCAD. Iko kwaive kushanduka kunoshamisa, tichifunga kuti akabva pakuve sketch muimbi uye karukureta yemabhuku ekunyorera + karukureta + Lotus 20. Zvaitaridzika kuva zvinonakidza kwandiri kutenda ...